सरकारबाट बाहिरिने एमालेको २ महिनाअघिको निर्णय किन भएन पूरा ? – Nepal Press
सरकारबाट बाहिरिने एमालेको २ महिनाअघिको निर्णय किन भएन पूरा ?
२०७८ जेठ २ गते १३:३२
कैलाली । गत चैत्र १५ गते सम्पन्न नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिने निर्णय गरेको खुलेको छ ।
त्यो बेला एमालेले कुन दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने भन्नका लागि ३ सदस्यीय कार्यदल समेत बनाइएको थियो । कार्यदलमा एमाले प्रदेशमा सह-इन्चार्ज महेश्वर पाठक, एमाले केन्द्रीय सदस्य झपट बोहरा र कैलाली जिल्ला अध्यक्ष रतन थापा छन् ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ २ गते १३:३२